Ururka Saaxiibtinimada – Suomi-Somalia Seura ry
Kieli- ja kulttuuripalvelut
Ururka Saaxiibtinimada Finland iyo Soomaaliya – Suomi-Somalia Seura ry
Ururkan waxaa la aasaasay 1986 dii, wuxuuna u taaganyahay horumarinta arimaha hoos ku xusan:
Xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee Finland iyo Soomaliya.
Ka shaqeynta, soo bandhigida iyo horumarinta arimaha dhaqanka, taariikhda iyo luuqada Af-Soomaaliga, si dadka Finnishka ah ay fursad ugu helaan inay wax ka bartaan kana ogaadaan dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida.
Sidoo kale inuu ka qeybqaato hirgalinta mashaariicda horumarinta.
Ururku intii uu jirey wuxuu qeyb lixaad leh ka soo qaatay:
Horumarinta iyo soo bandhigida arimaha dhaqanka, luuqada iyo taariikhda Soomaalida isagoo ururku arimahaas kala shaqeeya madxafyada dhaqanka iyo suuggaanta ee Finnishka iyo hay’adaha iyo ururada arimahaas ka shaqeeya.
Ururku wuxuu gacan ka geystaa fududeynta la qabsiga soogalootiga wadankan Finland qaasatan dadka Soomaalida, isagoo arimahaas kala shaqeeya ururada kale iyo ha’adaha arimahaas ka shaqeeya.
Ururku wuxuu sidoo kale gacan ka geystay aasaaskii dalada Soomaalida ee Finland Somaliliitto 1995tii, sidoo kale aasaaskii dalada ururada horumarinta ka shaqeeya ee Suomi-Somalia verkosto 2004tii. Si taas la mid ahna wuxuu ururada Soomaalida kala shaqeeyaa horumarinta hawlaha ururadu ay qabtaan.
Ururku wuxuu ka qeyb galaa ka hadalka arimaha ajaaniibta iyo Soomaalida si wada shaqeyn iyo horumarin ku dhisan. Ururku wuxuu wada shaqeyn joogto ah la sameeyaa ururada kale, hay’adaha dowlada iyo muwaadiniinta labada dal ee jecel wanaaga iyo wada noolaanshaha. Ururu gacmo furan ayuu ku soo dhaqeynayaa cidii xiiseyneysa hawlaha ururka, ka mid noqoshada ururka, fikir ku soo biirinta ururka iyo sidoo kale inay gacan ka geysato horumarinta ururka.
Hadafyada ururka ee 2016-2020 waxaa ka mid ah:
Dar-dar galiyo mashaariicda horumarinta.
Xoojiyo xiriirka labada dal dhinaca ganacsiga iyo wax wada qabsiga.
Xoojiyo xiriirka wada shaqeynta ee ururada iyo ha’adaha dowliga ah Finland iyo Soomaaliya
Xoojinta la shaqeynta hay’adaha caalamiga ah dhinacyada dib u dhiska , horumarinta iyo qalabeynta isbitaalda iwl.
Wixii wadashaqeyn ama akhbaar is-weydaarsi ah fadlan nagala soo xiriir: suomisomaliaseura(at)gmail.com
Halku dhiga Ururku waa Wada Shaqeyn, Horumar iyo Saaxiibtinimo.
Ulkoministeriö mukana Maailma kylässä -festivaaleilla – teemana ilmastonmuutos
View suomisomaliaseura’s profile on Facebook
View suomisomaliaseura’s profile on Instagram
View UCygccPmosnycGu18W8fSFgQ’s profile on YouTube
Sähköposti – Email: suomisomaliaseura(at)gmail.com
© 2018 Suomi-Somalia Seura ry
Suomeksi | English | Somali